Myanmar 18 Plus: ပန်းကလေးတပွင့်ရဲ့မေမေ
'၁၅-၁၆ အမြီးပေါက်၏။'ဟူသောစကားနှင့်အညီ စုမြတ်တယောက် အမြီးပေါက်ချင်စိတ်များ ဝင်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် စည်းကမ်းတင်းကျပ်လှစွာသောသူမ၏အမေကျောင်းဆရာမကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူငယ်ချင်းများတွင် အတွဲကိုယ်စီရှိနေသော်လည်း စုမြတ်တွင်တော့ ရည်းစားလက်မဲ့ဖြစ်နေပါသည်။၁၀တန်းကျောင်းသူစုမြတ်သည်
၁၆နှစ်အရွယ်လှသွေးကြွယ်ချိန်တွင် အများသူငါလိုဖလန်းဖလန်းနှင့်လန်းဖို့ရာ အမေဖြစ်သူ၏တင်းကျပ်သောစည်းကမ်းများကြောင့် မဖလန်းနိုင်ဘဲ ဂွမ်းနေရပါတော့သည်။သို့သော် ၁၀တန်းနှစ်စတွင်မလန်းခဲ့ရသော်လည်း နှစ်ဝက်စာမေးပွဲဖြေချိန်တွင်တော့ အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်၍ ချစ်သူကောင်လေးတစ်ယောက်ရလိုက်ပါသည်။ ရလိုက်သောချစ်သူကောင်လေးမှာလည်း စုမြတ်ကဲ့သို့ပင် ဖြူဖြူချောချောရှည်ရှည်လေးမို့ မြင်သူအားကျလောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကံဆိုးသည်က သူတို့နှစ်ဦးတွင်တွေ့ချိန်ဟူ၍ ကျောင်းချိန်လေးပင်ရှိသည်။စုမြတ်ကျောင်းလာချိန်ရော၊ ကျောင်းပြန်ချိန်ပါ သူမ၏အမေနှင့်သွားရသောကြောင့် ကောင်းထက်မှာအနည်းငယ် ကသိကအောက်ဖြစ်နေမိသည်။'စုရယ်..ကိုယ်တို့ အပြင်လေးဘာလေးလျှောက်လည်ရအောင်''ဟင့်အင်းးးမဖြစ်ဘူး.ကို အမေသိမှာ စုကြောက်တယ်..'
အကြောင်းမထူးသဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းထက်တယောက်စိတ်ပျက်နေပါတော့သည်။ ကောင်းထက်စိတ်ပျက်နေသည်ကိုသိသဖြင့် စုမြတ်က ကောင်းထက်လက်မောင်းလေးကိုဆုပ်ကိုင်၍ မှီနေလိုက်ပါသည်။ ချစ်သူ၏နူးညံ့တဲ့ထွေးသိပ်မှုကြောင့် ကောင်းထက်အနည်းငယ်စိတ်ပျော့သွားပါသည်။စုမြတ်မှီထားလို့သိပ်မကြာလိုက်။
ကလောင်ကလင်မုန့်စားတတ်ခေါင်းလောင်းထိုးပါတော့သည်။ ထိုတွင်တော့နှစ်ဦးသား မထချင်ထချင်နှင့် သပြေပန်းချုံလေးမှထွက်ခဲ့ကြပါသည်။သပြေပန်းချုံလေးသည် သူတို့နှစ်ဦး၏မူပိုင်ဘိလေးဖြစ်ပါသည်။ ၅တန်းမှ၁၀တန်းထိသင်သော အထက်တန်းကျောင်းကြီးတွင် နှစ်ဦးသားတီတီတာတာစကားဖောင်ဖွဲ့နိုင်သော လူလာနည်းသည့်အမှိုက်ပုံဘေးမှ သပြေချုံလေးပဲဖြစ်ပါတော့သည်။ကျောင်းဘက်စုံဆုပေးပွဲမတိုင်မီနှစ်ရက်အလို. . .'ကျောင်းဆုပေးပွဲကို နင်လာမှာလား..''လာမှာပေါ့ဟ ငါ့ကိုကိုတွေလာမှာလေ..''အမယ်..ညည်းကိုကိုရှိရသေးတယ်.'ပပနှင့်သူသူတို့နှစ်ယောက်ဆုပေးပွဲအကြောင်းလေပစ်နေကြချိန်တွင်
စုမြတ်ကတော့ ကောင်းထက်ပူဆာထားသည်ကို လိုက်လျောရ ကောင်းနိုးမကောင်းနိုးကို ချီတုံချတုံဖြင့် တွေးနေပါတော့သည်။'ဟဲ့..စုမြတ်နင်ဘာတွေတွေးနေတာလဲ..'ပပက ပုခုံးကိုပုတ်၍စလိုက်သဖြင့် စုမြတ်၏အတွေးများ ခဏတာအနားရသွားပါတော့သည်။'ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာ.. ဟိုဟိုဒီဒီပါ..''ဟိုဟိုဒီဒီလုပ်မနေနဲ့..ဒေါ်စုမြတ် ပွဲနေ့ကျရင် နင်ကောင်းထက်နဲ့ချိန်ထားတယ်မှတ်လား..''အင်းးးဟုတ်တယ်.. ငါလည်းအဲ့ဒါပဲတွေးနေတာ။ အမေ့မျက်စိရှေ့ကနေ ဘယ်လိုလစ်ထွက်ရမလဲဆိုတာ'..'စဉ်းစား..စဉ်းစား..။ နင်လိုတာရှိရင် ငါတို့လည်းကူညီပေးမှာပါ..''ကျေးဇူးပါဟာ..'သူသူ၏'လိုတာရှိရင်ကူညီပေးမယ်'ဆိုသောစကားသည် စုမြတ်ကို အနည်းငယ်အားတက်သွားစေခဲ့ပါသည်။ကျောင်းပြန်ခါနီးတွင် ကောင်းထက်ကပပတို့နှင့်စုမြတ်အား ပွဲနေ့ချိန်းထားတာလာဖို့ကို သတိပေးလိုက်ပါသည်။ကောင်းထက်က
ဆုပေးပွဲနေ့တွင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ရင်ပြင်ကိုသွားကြရအောင်ဟုပူဆာထားသည်။ ကောင်းထက်က အတင်းပူဆာသည်ကတကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေကလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သည်ကတကြောင်း၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလိုက်ချင်သည်ကတကြောင်း၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စုမြတ်တယောက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သို့သော် ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လာရန် အမေကိုဘယ်လိုပတ်ရမလဲဟူ၍ သူမအချိန်ရှိတိုင်းတွေးတောနေမိပါသည်။
ဆုပေးပွဲနေ့ရောက်သော်. . .ထုံးစံကိုမပယ်ဖျက်ဘဲ သွားမြဲအတိုင်း သူမအမေနှင့်ပင် ပြင်ဆင်ခြယ်သ၍ကျောင်းသို့ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းရောက်ပြီးနောက် သူမ၏အမေကဆရာမမို့ လုပ်စရာရှိသည်များကို သွားဝိုင်းကူပေးနေပါသည်။ စုမြတ်ကတော့ သူမ၏သူငယ်ချင်းများရှိရာသို့သွား၍ စတင်Planဆွဲပါတော့သည်။ ၉နာရီမှစမည့်ပွဲကို ၈နာရီကတည်းက ရောက်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် အစီအစဉ်ဆွဲချိန်ပိုထွက်ပါသည်။'ကဲ..ငါ့တို့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်ကြမယ်နော်..ဟုတ်ပြီလား စုမြတ်..'သူသူ၏အစီအစဉ်ကို အားလုံးကခေါင်းညိမ့်သလို စုမြတ်လည်း လက်ခံလိုက်ပါသည်။အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော်. . .ပွဲစပြီမို့
စုမြတ်တယောက် သူ့အမေအခြေအနေကိုကြည့်၊ အိုကေသဖြင့်ထိုင်ခုံမှထ၍ ခန်းမထဲမှ အလျင်အမြန်ထွက်လာလိုက်ပါတော့သည်။ သူမအမေသည် အရှေ့ကိုသာအာရုံရောက်နေသဖြင့် သူမထွက်သွားသည်ကို မသိလိုက်ချေ။ထို့နောက် သုံးယောက်သားအိမ်သာထဲသို့သွားကာ အဝတ်လဲလိုက်ပါသည်။ စုမြတ်လည်း ပပယူလာပေးသော အဝတ်တစုံကိုဝတ်၍ အိမ်သာထဲမှထွက်ခဲ့ကြပါသည်။'အမြန်သွားရအောင်.. ဟိုကောင်တွေစောင့်နေလောက်ပြီဟ..'ပပ၏နှိုးဆော်ချက်ကြောင့် သုံးယောက်သား ခပ်မြန်မြန်ဖြင့် ချိန်းထားရာ ဂိတ်ပေါက်ဝသို့လျှောက်လာခဲ့ကြပါသည်။ ဂိတ်ဝတွင်အစောင့်မရှိသဖြင့် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပင် အပြင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။'လာ..လာ..လာ.. သွားမယ်'လမ်းမပေါ်ရောက်သောအခါ
မိုးကျော်ကTaxiဖမ်းငှားလိုက်ပါသည်။ လိုင်းကားနှင့်သွားမည်ဆိုပါက ပွဲအပြီး၁၂နာရီကို မမီနိုင်မှာစိုးသဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျောက်ဝိုင်းနှင့်မြေနီကုန်းသည် မဝေးသော်လည်း မနီးသောခရီးဖြစ်သည်။Taxiအရှေ့ထိုင်ခုံတွင်
ကောင်းထက်ထိုင်၍ မိုးကျော်နှင့်အောင်သူတို့ကတော့ နောက်ဖုံးတွင်နေရာယူထားကြသည်။ စုမြတ်တို့ခြောက်ယောက်စကားတပြောပြောနှင့်မို့
စုမြတ်၏စိုးရိမ်စိတ်များ လွင့်ပြယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ရင်ပြင်ရောက်သော်. . .အားလုံးကားပေါ်ကဆင်း၍ ရေကူးကန်ရှိရာသို့ ဦးတည်ခဲ့ကြပါတော့သည်။ ရေကူးကန်ထဲမဝင်ခင်တွင် ပပကအားလုံးကို အကြံတခုပေးလိုက်ပါသည်။'ဟဲ့ဟဲ့..ကောင်းကြီးမဝင်နဲ့အုန်း.. ငါပြောစရာရှိလို့..''ဘာလဲ သူသူရဲ့.. ဘာလုပ်မလို့လဲ..''ငါပြောပြမယ်.. နားထောင်..''အင်း..ပြောစရာရှိတာပြော ကြာတယ်..''ပြောမယ်ဟာ.. ငါတို့တွေအခုလိုတအုပ်အမကြီးသွားနေမယ့်အစား ရောက်တုန်းလေး ကိုယ့်အတွဲနဲ့ကိုယ် နေရအောင်ဟာ..''နင် ဘာပြောချင်တာလဲ.. သေချာပြော..'အောင်သူက စိတ်မရှည်သံဖြင့်ဝင်ပြောလိုက်ပါသည်။'သူသူပြောချင်တာဒီလိုကွာ.. မင်းတို့ကကိုယ့်ဘာသာလိမ့်၊ ငါတို့လည်းကိုယ့်ဘာသာလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ဒီအရှေ့မှာပြန်ဆုံမယ်ကွာ။ ဘယ်လိုလဲ.. သဘောတူလား'မိုးကျော်က သူသူအစားဝင်ပြောပေးလိုက်သောစကားကို အားလုံးက လက်ခံလိုက်ပါသည်။'ဒါဆိုကောင်းပြီ.. ၁၁နာရီ၁၅ဆိုရင် အားလုံးဒီမှာပြန်ဆုံမယ်'ကောင်းထက်က အချိန်သတ်မှတ်ပေးပြီးနောက် မိုးကျော်နှင့်သူသူတို့အတွဲက ပန်းခြံဘက်သို့သွားပြီး အစားသမားပပကတော့ အောင်သူကို မုန့်ဝယ်ကျွေးခိုင်းရန် မုန့်ဆိုင်သို့ဝင်သွားပါသည်။'ကဲ..စု ကိုယ်တို့ရော ဘာလုပ်ကြမလဲ..။ ကိုယ်ကတော့ ရေဆော့ချင်တယ်စုရော''ဟင့်အင်း စု ရေမဆော့ချင်ဘူး..''ဒါဆိုလည်းပြီးရောလေ.. လာ စု ကိုယ်တို့ဟိုဘက်သွားရအောင်'မသိရင်တော့ ချစ်သူလေးအလိုကျလိုက်လျောသလိုလိုနဲ့ အခုတော့ သူ အလိုကျရန် ရင်ပြင်၏လူကျဲ၍ချောင်ကျသောနေရာများသို့ ဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတော့သည်။
ကောင်းထက် ကံတက်နေ၍ထင်သည်။ သူခေါ်လာသောနေရာတွင် ကြိုဦးသူမရှိသလို လူအလာလည်း ရှင်းလှသည်။'စု ဘယ်လိုလဲ.. ကိုယ်ခေါ်လာတဲ့နေရာကြိုက်ရဲ့လား''ဟင့်အင်း..လူလည်းမရှိဘူး..'စု
အနည်းငယ်မူလိုက်သည်။ ကောင်းထက် ထပ်မံစည်းရုံးသည်။ တိုးတတ်မှုမြန်သည်ဟုဆိုရမည်။ စုမြတ်၏နှုတ်ခမ်းများသည် ကောင်းထက်၏နှုတ်ခမ်းများနှင့်ထိတွေ့ကာ လျှာချင်း ရင်းနှီးဖလှယ်နေကြပါသည်။ ထိုသို့ဖလှယ်ရင်းမှ ကောင်းထက်၏လက်တဖက်သည် စုမြတ်အင်္ကျီအောက်ကို ထိုးရှိုလိုက်ပါသည်။ စုမြတ်က ဝင်လာသောလက်ကို အသာဆွဲထုတ်၍ ကောင်းထက်နှင့်နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ပါသည်။'ကိုကလည်းကွာ.. အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။ လူတွေမြင်ကုန်ရင်မကောင်းဘူး..'စုမြတ်သည် ပြောလည်းပြော၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အနည်းငယ်မျက်စိကစားလိုက်ပါသည်။'စုရယ်..ဘယ်သူမှမမြင်ပါဘူး။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်းရှိတာ''ဘာလဲ..စုကကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးလား'မချစ်ဘူးလားဟုမေးခံရသဖြင့် စုမြတ်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့... 'စုကို့ကိုချစ်ပါတယ်..ကိုရယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေမြင်မှာကြောက်လို့ပါ..''ဘာမှမကြောက်နဲ့ ကိုတယောက်လုံးရှိတယ်။ နောက်ပြီး ဒီနားကို ဘယ်သူမှမလာပါဘူး'ချစ်သူ၏စကားကြောင့်
စုမြတ်တယောက် ချစ်သူအလိုကျ နှုတ်ခမ်းချင်းများတေ့၍ လျှာချင်းပြန်ဖလှယ်ကာ သူမရင်သားများအား ချစ်သူလက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးနေမှုကို လောကစည်းစိမ်တစ်ခုနှယ် စုမြတ်တယောက် သာယာနေပါတော့သည်။ကောင်းထက်လည်း သူ၏စည်းရုံးမှုအထမြောက်သဖြင့် ကျေနပ်နေမိသည်။ နောက်တဆင့်သည် အောက်ပိုင်းအဖုတ်လေးသာဖြစ်သည်။ ထိုအဆင့်ကို တက်ရန် သူပြင်ဆင်နေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ့နာရီမှ တတီတီမြည်သံထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။နာရီသံကိုကြားသည်နှင့် စုမြတ်ရော၊ ကောင်းထက်ပါ နှစ်ဦးစလုံး သဘောပေါက်စွာ အရှိန်သတ်လိုက်ကြပါတော့သည်။'ကို..စုတို့ သွားကြရအောင်..'ကောင်းထက်တယောက်
အရှိန်ဖျက်လိုက်ရသဖြင့်ကသိကအောင့်ဖြစ်သွားပါသည်။ သို့သော်လည်း အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရမို့ စုမြတ်နှင့်လက်ချင်းချိတ်၍ အားလုံးဆုံရန်ချိန်းထားရာ ရေကူးကန်အပေါက်ဝသို့ ထွက်လာခဲ့ပါသည်။သူတို့ရောက်ချိန်တွင်တော့ ကျန်နှစ်တွဲက သူတို့အရင် ရောက်နှင့်ပြီဖြစ်သည်။ အားလုံးစုံပြီမို့ သုံးတွဲစလုံးtaxiငှား၍ပင် ကျောင်းရှိရာဆီသို့ ပြန်လာခဲ့ပါတော့သည်။ကျောင်းထဲသို့ဝင်ခါနီးတွင်
ကောင်းထက်က နမ်းသွားအုန်းဆိုသဖြင့် အဝင်ဝထောင့်ဘက်လေးတွင် လူရိပ်လူခြေကြည့်ကာ နှုတ်ဆက်အနမ်းများ ခြွေပေးလိုက်ပါသည်။ ကားလမ်းရှင်းသဖြင့် ၁၂မထိုးမီစောစော ပြန်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။သုံးယောက်သား
အိမ်သာသို့အမြန်ပြန်ပြေး၍အဝတ်အစားလဲကာ ဟောခန်းရှိရာဖက်သို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ဟောခန်းထဲသို့မဝင်နေတော့ဘဲ ဘေးဘက်လေးမှာတင်ရပ်ကြည့်နေပါသည်။ပွဲလည်းပြီးပြီမို့ စုမြတ် သူ့မေနှင့်အတူ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ သူ့အမေ၏အခြေအနေက တည်ငြိမ်နေပြီး ပုံမှန်လေးပဲမို့ စုမြတ်စိတ်အေးရပါသည်။စုမြတ်၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ အမေမသိအောင် ခိုးထွက်ခြင်းကိစ္စသည် အောင်မြင်မှုရသည်ဖြစ်သဖြင့် နောက်ထပ်လည်း ခိုးထွက်ရန်အတွက် အားရှိနေပါတော့သည်။
ပန်းပျိုးသည့်လက်ဒေါ်စုစုအောင်သည် အလယ်တန်းပြဆရာမတဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏သမီးလေးငါးတန်းလောက်တွင် ယောင်္ကျားသေသွားပြီး ယောင်္ကျားရှာထားခဲ့သောပိုက်ဆံများနှင့် သေသောအခါရသောစ်နာကြေးများကြောင့် ယခုကဲ့သို့အဆင့်မီမီနေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယောင်္ကျားလုပ်သူမှာ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားဖြစ်သည်။ သမီးလေးမှာလည်း သူ့အဖေရှိစဉ်က အလိုလိုက်ခံထားရသဖြင့် အဖေမရှိတော့သော်လည်း အဖေရှိတုန်းကအတိုင်းဆိုးချင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်စုစုအောင်သည် သူမ၏တဦးတည်းသောသမီးလေးကို လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် အဖေလိုရောအမေလိုပါ ဆုံးမသွန်သင်နေရသည်။ သမီးလုပ်သူစုမြတ်သည် ငယ်စဉ်ကတော်တော်ဆိုးခဲ့သည်။ စုမြတ်အပြစ်လုပ်သည့်အခါများတွင် ဒေါ်စုစုအောင်သည်ပါးစပ်ဖြင့်ဆုံးမသည်။ ရိုက်၍ဆုံးမသည်။ သို့သော်ဆိုးမြဲအတိုင်းဆိုးသည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါ်စုစုအောင်သည် အပြစ်ပေးခြင်းဖြင့် လိမ္မာအောင်ဆုံးမကြည့်ပြန်သည်။ ဆုမြတ်အပြစ်လုပ်ပြန်သောအခါ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်
ဆုမြတ်ကိုဖင်ချွတ်၍ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းသည်။ ဖင်ချွတ်ရိုက်ဖူးသော်လည်း ဖင်ချွတ်ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပြီးနောက်တွင်တော့ စုမြတ်အနည်းငယ်ပိုအပိုးကျိုးလာသည်။အရွယ်ကလည်းအနည်းငယ်ရလာပြီမို့ ဖင်ချွတ်ရခြင်းကို ရှက်တတ်လာသည်။ သားအမိနှစ်ယောက်တည်းနေသောအိမ်တွင် အိမ်မှု့ကိစ္စမှန်သမျှကို ဒေါ်စုစုအောင်ကသာလုပ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အချိန်မပေးနိုင်တော့တာမို့ ဒေါ်စုစုအောင်သည် အိမ်အကူအဖြစ် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သော ရွာမှကောင်မလေးတယောက်ကို ခေါ်ထားလိုက်ပါသည်။ထိုကောင်မလေးသည်
သူမသမီးဆုမြတ်နှင့်ရွယ်တူဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုကောင်မလေးသည် စာပေသင်ကြားဖူးခြင်းမရှိပေ။ အရင်ကသားအမိနှစ်ယောက်တည်းရှိသဖြင့်အပြစ်ပေးခံရသောအခါတွင် စုမြတ်သိပ်မရှက်တတ်သော်လည်း အခုတွင်တော့ သူမနှင့်ရွယ်တူကောင်မလေးတယောက်ရှေ့တွင် ဖင်ချွတ်ပြီးအပြစ်ပေးခံရမည်ကို စုမြတ်ကြောက်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တတ်နိုင်သမျှအပြစ်လွတ်အောင်နေပါသည်။ သို့တိုင်အောင် တခါတရံတွင် အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းဖြင့် အိမ်အပေါ်ထပ်နှင့်အောက်ထပ်ဆင်းတတ်လုပ်သော လှေကားအလယ်ထောင့်တွင် မတ်တပ်ရပ်၍ အပြစ်ပေးခံရတတ်ပါသေးသည်။ဒေါ်စုစုအောင်သည် သူမ၏ကျောင်းဆရာမဟူသောဂုဏ်ကို အရမ်းကိုတန်ဖိုးထားသူဖြစ်သည်။ သူတို့အိမ်တွင် မိန်းခလေးများသာရှိသဖြင့် ရပ်ကွက်ကတမျိုးတမည်အပြောမခံရလေအောင် သူမခြံထဲသို့ယောင်္ကျားများမဝင်လာစေရန် သူမကိုယ်တိုင်လည်းထိန်းသည်၊ သူမအိမ်မှသမီးနှင့်အိမ်အကူကောင်မလေးကိုလည်း ယောင်္ကျားလေးများနှင့် ပရောပရီမဆက်ဆံရန်မှာထားသည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဘယ်ယေကာင်္ကျားလေးကိုမှ အိမ်လည်မခေါ်ရန် သူမ၏သမီးပိုအတင်းအကျပ်မှာထားသည်။သို့တိုင်အောင် သူမ၏သမီးသည်စကားကိုနားမထောင်ဘဲ ၉တန်းတုန်းကအခန်းထဲမှ ရွယ်တူကောင်လေးတယောက်ကို အိမ်ခေါ်လာဖူးသည်။ ဒေါ်စုစုအောင်သည် စခေါ်လာချိန်က မသိပေ။ နောက်မှသာဘေးအိမ်သူများနှင့်စကားစပ်၍ ပြောမှသာသိခြင်းဖြစ်သည်။ တဖက်ကရိုးရိုးသာပြောသော်လည်း ဒေါ်စုစုအောင်သူမသမီးကို တော်တော်ဒေါသထွက်သွားသည်။ အမေလုပ်သူက ယောင်္ကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေကို အိမ်မခေါ်လာပါနဲ့ဆိုမှ အိမ်ခေါ်လာတယ်ဆိုပြီး မေးမေးပြီးရိုက်ပါသည်။အဖုံးအကာမပါသောဖင်ကြီးပေါ်ကို
ကာထားသောလက်ကို ချုပ်ပြီးနောက်ဒေါ်စုစုအောင်သည် သူမသမီး၏တင်းပါးကို ဒေါသဖြင့်'တရွှန်းရွှန်းးး'ရိုက်ပါသည်။ အဆုံးတွင်တော့ ကြိမ်လုံးလည်းကျိုးသွားပြီး စုမြတ်လည်း'တဟင့်ဟင့်'နဲ့ ငိုနေပါတော့သည်။ ထိုသို့အပြစ်ပေးခြင်းကို ဒေါ်စုစုအောင်သည် အိမ်အကူကောင်မလေးအရှေ့မှာပင် ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့မှာသာ အိမ်အကူကောင်မလေးကိုလည်းဆုံးမပြီးသား ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စုမြတ်သည်လည်း ထိုအချိန်မှစ၍အပြစ်မလုပ်တော့ဘဲ လိမ္မာစွာနေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုနေ့သည်စုမြတ်အတွက်အလွန်ပင်အမှတ်ရဖွယ်နေ့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုနေ့ကသူမနှင့်အိမ်အကူကောင်မလေးတို့ အတူအိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတွင် ရှိနေချိန်ဖြစ်သည်။ သူမအမေသည်အိမ်သို့ ဒေါသနှင့်ပြန်ရောက်လာပြီးရောက် သူမကိုမေးမေးပြီးရိုက်ပါသည်။ ရိုက်နေရင်းမှာပင် သူမဝတ်ထားသော အိမ်နေရင်းဘောင်းဘီတိုလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ထပ်မံရိုက်ပါသည်။ ကြိမ်လုံးကျိုးသွားချိန်တွင်တော့ သူမခဏအနားရပါသည်။
သိပ်မကြာလိုက်ပါ သူမအမေကသူမကိုဆွဲထူပြီး 'နင့်ကိုအပြစ်ကောင်းကောင်းပေးရမယ်'
ဟုဆိုကာ နောက်ဖေးဘက်အိမ်သာရှိရာသော ဆွဲခေါ်သွားပါသည်။ ထို့နောက်အိမ်သာထဲတွင်တံခါးကို သော့ခတ်၍သူမအား ပိတ်လှောင်ထားပါသည်။ အစပိုင်းတွင် အရိုက်ခံထားရသော နာကျင်မှု့ကြောင့် အခြားအရာများကိုမခံစားမိသေးပေ။ အချိန်တော်တော်ကြာသွားချိန်တွင်တော့ အိမ်သာနံ့ကိုစတင်ခံစားရပါသည်။စုမြတ်တို့အိမ်တွင် အိမ်သာတစ်လုံးနှင့်ရေချိုးခန်းတခုသာရှိသည်။ သို့တိုင်အောင်အိမ်သာလာတတ်သူ တဦးတယောက်ပင်မရှိပေ။ ထို့ပြင်အိမ်အကူကောင်မလေး၏အသံကိုကြားရသော်လည်း သူ့အမေ၏အသံကိုမူမကြားရပေ။ဒေါ်စုစုအောင်သည်လည်း သူမ၏သမီးကိုရိုက်ပြီးနောက် အခန်းထဲတယောက်တည်း ကြိတ်ငိုနေပါသည်။ သူမသည် သူမ၏သမီးလေးကို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဟိုလိုဒီလိုတွေအပြောမခံရအောင် အခုကဲ့သို့ဆုံးမနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက မိန်းခလေးနဲ့ယောင်္ကျားလေးတွဲတွေ့လျှင် အများအားဖြင့် သမီးရည်းစားလို့ ထင်တတ်ကြသည်။ သူ့သမီးကငယ်ငယ်လေးနဲ့ ရည်းစားထားနေတယ်လို့ အများကပြောကြမှာကို
သူမအကြောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အခုလည်းညနေစောင်းနေပြီ ထမင်းဆာလောက်ပြီဖြစ်သော သမီးအား အပြစ်ပေးရန် အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့ပါသည်။အိမ်သာတံခါးသော့ဖွင့်သံကြောင့် ဗိုက်ဆာနေသောစုမြတ်အနည်းငယ်အားတတ်သွားပါသည်။'ဒီညထမင်းမစားရဘူး'ဟူသော
သူမအမေ့၏စကားကြောင့် စုမြတ်အားလျော့သွားပါသည်။ ထို့အပြင်ထမင်းမစားရုံမက ညအိပ်သောအခါတွင်လည်း စုမြတ်ကိုယ့်အခန်းတွင်ကိုယ်မအိပ်ရဘဲ အိမ်ဖော်မလေးအိပ်သောအခန်းထဲတွင် ဘာအဝတ်အစားမှမဝယ်ဘဲအိပ်ရန် သူမအမေထပ်မံအပြစ်ပေးပြန်ပါသည်။အဝတ်အစားများမဝတ်ဘဲညအိပ်ခြင်းသည် သိတတ်သည့်အရွယ်မှစ၍ ဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်တယောက်တည်းအိပ်ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘေးတွင်ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူအိမ်အကူကောင်မလေးရှိနေခြင်းသည်လည်း မိန်းခလေးချင်းဖြစ်သော်လည်း ရှက်နေမိပါသည်။ မွေ့ယာနဲ့မဟုတ်ဘဲ ဖျာခင်းပေါ်တွင်အိပ်ရခြင်းကြောင့် အိပ်မပျော်ဘဲလူးလှိမ့်နေမိပါသည်။ တချက်တချက်ဘေးမှ အိပ်နေသောတယောက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိချိန်တွင်တော့ အိပ်နေသောသူမကမသိသော်လည်း စုမြတ်မှာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားပါသည်။ ထိုညကိုကျော်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့ စုမြတ်လိမ္မာလာပါသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်တော့ ကျောင်းဆရာမဒေါ်စုစုအောင်၏သမီးလေးစုမြတ်သည် တစခန်းထလို့ ဆိုးသွမ်းနေပြန်ပြီဖြစ်ပြီး ဒါကိုတော့ပန်းပျိုးသူဒေါ်စုစုအောင်တယောက်မသိရှိသေးပေ။
ဘဝမလှသူလေးသိတတ်စအရွယ်မှာကတည်းအဖေမရှိသူလေးအေးသည် ကျန်မာရေးမကောင်းသောအမေကို လုပ်ကျွေးနေသူလေးဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကျွေးသည်ဆိုရာတွင်လည်း သူအသက်လေးနှင့်မမျှအောင်ကို လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းစားဖို့သာရပြီးဆေးဖိုးဝါးခမရနိုင်ခဲ့သည်မို့ အေးအသက်၇နှစ်မှာတင် အေးအမေဆုံးပါးသွားခဲ့ပါသည်။ အမေမရှိသောအေးကို လက်တိုလက်တောင်းခိုင်းရန်အတွက် ရွာထဲရှိဦးလေးတော်စပ်သူတဦးကမွေးစားခဲ့ပါသည်။
အေးသည်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကိုအလိုက်သိပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်းအေးဦးလေး၏မိန်းမက အေးကိုမျက်မုန်းကျိုးလာပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အေး၏အလိုက်သိမှု့ကိုချီးမွမ်းပြီး သူ့သမီးများကို အေးနှင့်နှိုင်း၍ဆုံးမသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးလေးမှာလည်းပွဲစားတယောက်မို့ အိမ်မှာကပ်သည်မရှိပေ။ ဦးလေးမိန်းမကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပင် သူမမျက်မုန်းကျိုးနေသောအေးကို အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာ၍ ရိုက်နှက်ပါသည်။ သူမဦးလေးတွင်ရှိသော သမီးနှစ်ယောက်ကလည်း သူတို့အမေနှင့်အတူ အေးကိုအနိုင်ကျင့်ပါသည်။ ဦးလေး၏မိန်းမသည် အေးအားသူတို့ရိုက်နှက်နေခြင်းကို အပြင်လူများမသိစေရန် အိမ်ထဲမှာပင်အေးအား အပြစ်ရှာရိုက်နှက်နေပါသည်။အစပိုင်းတွင်သမရိုးကျရိုက်နှက်သော်လည်း
နောက်ပိုင်းတွင်တော့ သူမသမီးအငယ်မ၏ဘောင်းဘီကို လှမ်းထားရာမှ မြောင်းထဲပြုတ်ကျသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ အေးအားဖင်ချွတ်သောကိစ္စကို စတင်ပါတော့သည်။ ဘောင်းဘီရွှံ့ပေသွားသောကြောင့် အေးအားဘောင်းဘီချွတ်၍ ဖင်ကိုဝါးခြမ်းပြားနှင့်ရိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက်ဘောင်းဘီကိုအပြီးချွတ်ခိုင်းပြီး အိမ်အလုပ်များကို ဖင်တုန်းလုံးဖြင့် ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေရပါတော့သည်။ အေး၏ဦးလေးပြန်ရောက်ချိန်များတွင်သာ အေး၏အောက်ပိုင်းတွင်အဝတ်ကပ်ပါတော့သည်။ ဦးလေးကိုမတိုင်ဖို့ ခြိမ်းခြောက်ထားသဖြင့်လည်း တိုင်ဖို့ကိုမတိုင်ရဲခဲ့ပေ။ငယ်စဉ်ကမသိသာသော်လည်း
ယခုအေးအသက်၁၀ကျော်၁၁နှစ်ထဲမှာမို့ ရှက်စိတ်ဆိုတာလေးအနည်းငယ်သည် အေးဆီတွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဦးလေးသမီးအငယ်မ(၁၂နှစ်)နှင့် အကြီးမ(၁၅နှစ်)တို့သည် ဦးလေးမြို့မှဝယ်လာသော စကပ်၊ဂါဝန်များဖြင့်လှနေသော်လည်း အေးတယောက်မှာတော့ ဦးလေးရှိချိန်မှလွှဲ၍ အခြားအချိန်များတွင် အောက်ပိုင်းကိုဖုံးကွယ်ခွင့်မရပေ။ နောက်ပိုင်းပိုဆိုးလာသည်က
အေးကိုဖင်ချွတ်ရိုက်ရုံ အောက်ပိုင်းဗလာကျင်းခိုင်းထားရုံတင်မဟုတ်ဘဲ အေး၏အဖုတ်နှင့်ဖင်တို့ကို ဦးလေးသမီးနှစ်ယောက်က သူတို့အသားမဟုတ်သည့်အတွက် နှိုက်ချင်တိုင်းနှိုက်၊ ကိုင်ချင်တိုင်းကိုင်နေကြပါသည်။ မိန်းခလေးချင်းထို့သို့လုပ်ရခြင်းကိုလည်း သူတို့သဘောကျနေဟန်တူသည်။ ညဖက်တွေမှာဆို ပိုလုပ်ကြသည်။ တညတွင်တော့ အေး၏အဖုတ်ကိုအချိန်တော်တော်ကြာ
ဝိုင်းနှိုက်နေကြသည်မို့ အေးသေးသောက်ချင်လာပါသည်။ သို့သော်သေးပေါက်ခွင့်မပေးသည့်အပြင် အေးအဖုတ်အားနှိုက်ခြင်းသည် ဒီ့ထက်ပိုကြမ်းလာပါတော့သည်။ အေးမခံနိုင်ဘဲသေးနည်းနည်းထွက်သွားပါသည်။ သေးထွက်လာ၍အကြီးမက အေး၏အဖုတ်ကို သူမ၏လက်ဝါးပြားဖြင့် 'ဖေါင်းးးး'ခနဲရိုက်လိုက်ပါသည်။ ပူခနဲဖြစ်ပြီး အေးသေးထွက်ခြင်းရပ်သွားပါသည်။ သေးလန့်သွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ 'ဟဲ့မိအေးသေးထပ်ထွက်မယ်မကြံနဲ့ သေးထပ်ထွက်ရင်ထွက်သမျှကိုပြန်လျက်ရမယ်၊ အခုငါ့လက်ပေါ်ကနင့်သေးတွေကိုအရင်ပြန်လျက်စမ်း'အကြီးမကထိုသို့ပြောရင်းလက်ကိုအေးပါးစပ်နားကပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
အကြီးမ၏အပြုအမူကို အငယ်မပင် အထူးအဆန်းဖြင့် ကြည့်နေမိပါသည်။ အေးလည်းပြူးတူးလေးနဲ့ကြည့်နေပါသည်။ ဒါကိုအကြီးမကြီးက စိတ်မရှည်စွာဖြင့် သူမ၏သေးပေနေသောလက်ကို အေး၏ပါးစပ်ထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်ပါသည်။အေးလည်းဝင်လာသောလက်ကိုပြန်မထုတ်ရဲတာကြောင့် ငုံထားလိုက်ပါသည်။'ငုံမထားနဲ့စုပ်'အကြီးမကြီးစုပ်ဆိုသဖြင့် အေးလည်းကြောက်ကြောက်ဖြင့် 'တပျွတ်ပျွတ်' စုပ်နေရပါသည်။ ခဏအကြာတွင်တော့
အကြီးမကြီးကအေးပါးစပ်ထဲမှလက်ကိုထုတ်၍ လျက်ခိုင်းပြန်ပါသည်။ ဤသည်ကိုအငယ်မကပါ သဘောကျလာပြီး သူမ၏လက်ချောင်းများကိုအေးအဖုတ်ထဲသို့ထည့်ပြန်ပါသည်။ လက်ချောင်းများဖြင့်အေးအဖုတ်ကိုနှိုက်ပြီးနောက် ပေကျံလာသောအရည်များကို အေးအားလျက်ခိုင်းပြန်သည်။ တယောက်တလှည့်ထိုးနှိုက်မှု့ကြောင့် သိမ်မကြာခင်မှာပင်အေးအဖုတ်မှအရည်များထွက်ကျလာပါသည်။ မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြစ်သည်မို့ သေးများ'တဖြန်ဖြန်း'နှင့် အောက်သို့ချသွားပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဦးလေး၏ဇနီးသူတို့နားသို့ရောက်လာပြီး အေးသေးထွက်ကျသည်ကိုမြင်သဖြင့် အေးကိုဆူပါသည်။'ညည်းအသက်၁၂နှစ်ထဲရောက်နေပြီ၊အခုထိသေးမနိုင်သေးဘူးလားးး''ညည်းသေးတွေကိုကြမ်းပေါ်မှာအနံ့မကျန်အောင်အခုသုတ်စမ်း''မေမေအဲ့လိုမလုပ်ခိုင်းပါနဲ့သမီးမှာဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့အကြံရှိတယ်''ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသမီးငယ်လေးရဲ့''ဒီလိုလေအမေရဲ့အဝတ်နဲ့မသုတ်ခိုင်းဘဲသူ့ကိုဘဲလျှာနဲ့လျက်ခိုင်းလိုက်မယ်လေမကောင်းဘူးလား''သမီးငယ်အကြံကောင်းတယ်''ဟဲ့မိအေးနင့်သေးတွေကိုနင်ပြန်လျက်စမ်းကြမ်းမှာအနံ့တွေမကြံစေနဲ့နော်'ထို့နောက်အငယ်မတို့အမေအိမ်ရှေ့သို့ထွက်သွားပါသည်။
ဦးလေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဦးလေးဇနီးကသူမ၏အမဝမ်းခွဲအိမ်တွင် အိမ်အကူသွားလုပ်ရန် အေးအားအပ်လိုက်ပါသည်။ ဦးလေးဇနီးနှင့်အကြီးမအငယ်မတို့၏လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းအတွက် အေးအလွန်ပျော်နေလှပါသည်။ မြို့သို့ရောက်၍အိမ်အကူဖြစ်သွားကာမှ သူမမထင်မှတ်ထားသော လွတ်လပ်မှုများပင် ရခဲ့ပါသည်။ ဘဝမလှသောအေးသည်လည်း မြို့ရောက်၍အိမ်အကူဖြစ်ခါမှပင် အနည်းငယ်အဆင်ပြေသွားပါတော့သည်။
အိမ်မက်ဆည်းဆာကောင်းထက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်ကြင်နူးခဲ့သည်များကို တသသပြန်တွေးရင်း စုမြတ်သည်အိမ်ရာဝင်ခဲ့ပါသည်။ မအိပ်ခင်တချိန်လုံးတွင်လည်း ထိုအကြောင်းကိုသာ ထပ်ခါထပ်ခါတွေးနေပါသည်။သာယာလှသောကောင်းကင်ကြီးအောက်ရှိဥယျာဉ်တခုထဲတွင်
စုမြတ်သည်ကောင်းထက်၏ပုခုံးကိုခေါင်းမှီ၍ လှဲနေပါသည်။ စုမြတ်ဇိန်ရှိနေစေရန်
စုမြတ်၏ဆံနွယ်လေးများကို ကောင်းထက်ကပွတ်သပ်ပေးနေရင်း ချစ်သူနှစ်ဦးတို့သည် ချစ်သူဘဝကြင်နူးမှု၏အရသာကို ခံစားနေကြပါသည်။'စုလေးးးပျော်ရဲ့လားးး''ပျော်တာပေါ့ကိုရယ် ကိုနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တွေဟာစုအတွက်အပျော်ဆုံးအချိန်တွေဘဲ ကိုရော''ကိုလည်းစုလိုပါဘဲစုရယ်''ဟင် ဟုတ်လည်းဟုတ်ဘဲနဲ့'စုမြတ်ကသွေးတိုးစမ်းကာ ခပ်နွဲ့နွဲ့လေးပြောလိုက်ပါသည်။ကောင်းထက်ကလည်းစုမြတ်ခေါင်းတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်ပေးရင်း
စုမြတ်၏နဖူးလေးကိုငုံနမ်းလိုက်ပါသည်။ စုမြတ်လည်းကောင်းထက်ပေးသောအနမ်းလေးပေါ့ သာယာမိန်းမောသွားပါတော့သည်။ချုံကောင်းကောင်းကိုရွေးတတ်သောကောင်းထက်၏အကျင့်နှင့်အညီ
အခုလည်းချုံထူထူထဲတွင်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသံနည်း၍ကျေးငှက်သံလေးများသာဝေဆာနေသောနေရာတခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ တိတ်ဆိတ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုသည် ချစ်သူနှစ်ဦးကို အရဲတိုးဖို့နှိုးဆော်ပေးနေသလိုပင်။ အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံတတ်သောကောင်းထက်က
အလွန်ကောင်းမွန်ပုံရပါသည်။ ယောင်္ကျားလေးအထိအတွေ့မရှိသောစုမြတ်သည် ကောင်းထက်လက်များ၏ထိတွေ့မှုတွင်သာယာနေပါသည်။ ကောင်းထက်၏လက်နှစ်ဖက်သည် စုမြတ်၏ရင်မွှာနှစ်ခုပေါ်တွင်ရှိနေပြီး အင်ကျီအပြင်ဘက်မှနေ၍ ပွတ်သပ်နေပါသည်။ ကောင်းထက်ကအကဲစမ်းသည့်ပုံစံဖြင့်
စုမြတ်၏ညဖက်နို့အုံကို စုဆွဲညစ်လိုက်ပါသည်။ စုမြတ်လည်း'အင့်'ဆိုသည့်အသံလေး
ထွက်လာပြီး ကောင်းထက်၏လက်ကိုကိုင်လိုက်ပါသည်။ မလုပ်နဲ့ဟုသဘောဆောင်သေ်ာလည်း
ပါးစပ်ကထုတ်မပြောဘဲမျက်မိမှိတ်နေသဖြင့် ကောင်းထက်နောက်တခါထပ်လုပ်လိုက်ပြန်ပါသည်။ ဒီတခါတွင်တော့ စုမြတ်လက်မတားတော့ဘဲ သူမနှုတ်မ်းကိုသူမကိုက်၍သာ ငြိမ်ခံနေပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာကြောင့်ပင် ကောင်းထက်ကသဘောကျသွားပြီး စုမြတ်၏ဘယ်ဘက်နို့ကိုတလှည့် ညာဖက်နို့ကိုတလှည့်နှင့် တလှည့်စီဆော့ကစားနေပါသည်။ အင်ကျီအပြင်ကလုပ်နေသော်လည်း ဘောလီလျှောပေးထားရခြင်းကြောင့် ညှစ်ချက်များသည် စုမြတ်ကိုထိမိနေစေပါသည်။ ကိုယ်ချစ်ရသောရည်းစားက လုပ်နေခြင်းဖြစ်သဖြင့် စုမြတ်တယောက်နာကျင်နေသော်လည်း
ကောင်းထက်လက်ကတဆက်တည်းပင် စုမြတ်၏အင်ကျီကိုလှန်လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်စုမြတ်၏နို့သီးထိပ်လေးတွေကို လက်ဖြင့်ထိ၍ ကောင်းထက်ကဆော့ကစားပြန်ပါသည်။ စုမြတ်လည်းသာယာနေမိသူမို့ ကောင်းထက်အကြိုက်လိုက်လျော၍ မျက်စိမှိတ်ကာပင် ကောင်းထက်ပေါင်ပေါ်တွင် ဆက်လှဲနေလိုက်ပါသည်။တပွစ်ပွစ်နှင့်စုမြတ်နို့သီးလေးတွေကို ကောင်းထက်ကစို့နေပါသည်။ ကောင်းထက်၏တပွစ်ပွစ်စုပ်ခြင်းသည် စုမြတ်ရင်ထဲမှာကလိကလိဖြစ်နေပါသည်။ ကောင်းထက်တော်တော်သွက်ပါသည်
စုမြတ်၏ဘောလီကိုရှုပ်တယ်ဆိုကာ အပြီ့းဖြုတ်၍ဖယ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စုမြတ်အင်ကျီသည် လိပ့်တင်ထားသဖြင့် လည်ပင်းနားမှာရှိနေပါသည်။ စုမြတ်၏ရင့်ညွှန့်ကိုလည်း လျှာပြားကြီးနေသဖြင့် စုမြတ်လည်းတွန့်တွန့်လူးနေပြီဖြစ်သည်။ အခုအချိန်တွင်တော့ စုမြတ်ကမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်လှဲနေပြီး ကောင်းထက်ကတော့စုမြတ်ကိုခွကာ အပေါ်ပိုင်းကိုအပြီးသိမ်းနေပါသည်။ကောင်းထက်အပေါ်ပိုင်းမှအောက်ပိုင်းသို့မဆင်းသေးပါ၊
စုမြတ်ရင်ဘတ်တခုလုံးကတော့ ကောင်းထက်လျှာရာများဖြင့် နေရာလပ်မကျန်အေင်ပြည့်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင်ကောင်းထက်က နို့စုပ်ခြင်း၊လျှက်ခြင်းများကိုသာ ဆက်လုပ်နေပါသည်။အချိန်အတော်ကြပြီးချိန်တွင်တော့
ကောင်းထက်သည်စုမြတ်၏ထဘီအားဆွဲချွတ်လိုက်ပါသည်။ သို့သော်ထဘီကကျွတ်မသွားဘဲ စုမြတ်ကိုသာသတိဝင်လာစေပြီး အရုန်းအကန်အနည်းငယ်ဖြစ်သွးပါသည်။ စုမြတ်ကချစ်သေ်ာလည်း အောက်ပိုင်းကိုတော့မပေးလို၊ ကောင်းထက်ကလည်းအရှိန်ရနေပြီမို့ လိုချင်လှပြီဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ ပေးဆပ်ခြင်းဖြင့်ချစ်တတ်သည့်အသဲနှလုံးပိုင်ရှင်စုမြတ်ကပင် သူမထဘီကို လျှောချပေးလိုက်ပါသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီပန်းရောင်လေးကိုလည်း ချွတ်၍ဘေးတွင်အသာထားလိုက်ပါသည်။ အားလုံးချွတ်ပြီးသွားချိန်တွင်တော့ အမွှေးအုံလေးနှင့်တန်ဆာဆင်ထားသည့် အဖုတ်ဖွေးဖွေးလေးသည် ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ကောင်းထက်သည်လည်းပေါ်လာပြီဖြစ်သော
အဖုတ်လေးကို ကုန်းစုပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ စုမြတ်ထင်မထားလောက်အောင်ကောင်းသော အရသာတမျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါသည်။ စုမြတ်စိတ်ထဲလဲ ရှိန်းတိမ်းတိမ်းဖြစ်သွားပါသည်။ထုံးစံအတိုင်းပင် စုပ်ခြင်း၊လျှက်ခြင်းဖြင့်ပင် ကောင်းထက်အချိန်တော်တော်ဖြုန်းလိုက်ပါသည်။ ကောင်းထက်၏လုပ်ဆောင်မှုသည် အတော်လေးကောင်းပုံရသည် စုမြတ်၏အထိအတွေ့ကင်းသေညအဖုတ်လေးမှ အရည်ကြည်များ နှစ်ခါလောက်ပင်ထွက်သွားပါသည်။ ထိုအရည်များကိုလည်း ကောင်းထက်သာ ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ထို့နောက်မှာတော့ စုမြတ်ကိုလှဲနေသည့်နဂိုပုံစံအတိုင်းထား၍ သူ၏လိင်တံကိုအဖုတ်ဝတွင်တေ့ကာ ထုတ်ချည်သွင်းချည်လုပ်ပါတေ့ာသည်။ အစပိုင်းတွင်အသွင်းအထုတ်နူးညံ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်တော့ ပြင်းထန်လာသောသွင်းမှု့များကြောင့် စုမြတ်မခံနိုင်ဘဲ ထအော်မိပါတေ့ာသည်။အလန့်တကြားနှင့်မျက်စိဖွင့်လိုက်ချိန်တွင်တော့ မိမိအိပ်ခန်းထဲရှိခုတင်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသဖြစ်သမျှသည် အိမ်မက်ဖြစ်ကြောင်းကို နားလည်သွားပါသည်။'သမီးဘာဖြစ်လို့လဲ'အခန်းထဲသို့အလျင်အမြန်ဝင်လာသောေါ်စုစုအောင်၏စိုးရိမ်၍မေးလိုက်သည့်စကားသံဖြစ်ပါသည်။'ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မက်မက်တာပါမေမေ''ဘုရားရောရှိခိုးအိပ်ရဲ့လား''မရှိခိုးမိလိုက်ဘူးမေမေ''အေးးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ ဘုရားရှိခိုးပြီးအိပ်တော့ နောက်မမေ့စေနဲ့''ဟုတ်ကဲ့'စုမြတ်သည်
သူမအမေထွက်သွားပြီးနောက် ဘုရားရှိခိုးပြီးပြန်လှဲလိုက်ပါသည်။ လှဲနေရင်းကအိမ်မက်အကြောင်းကိုတွေးရင်း တစ်ကိုယ်တည်းတံတွေးမြိုချနေမိပါတော့သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သုမအိမ်စက်ပါတော့သည်။
မီးလောင်သွားသောပန်းခလေးပန်းတပွင့်ကိုပျိုးရသည်မှာတကယ်မလွယ်လှပေ။ ဒေါ်စုစုအောင်သည် သမီးစုမြတ်ကို စည်းကမ်းတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်နေသည့်ကြားမှ စုမြတ်သည် ချစ်သူနှင့်ချိန်းတွေ့ချိန်ကို အတင်းရအောင်ကြံဖန်ပါသည်။ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးသည်လည်း အဆင့်တစ်ခုအထိရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်ချိန်တွင်တော့ အရာအားလုံးသည် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့သည်။ ချစ်လှပါသည်ဆိုသောချစ်သူနှစ်ဦးသည်လည်း တကွဲတပြားစီဖြစ်သွားတော့ပြီဖြစ်သည်။ ဆယ်တန်းနှစ်ယောက်စလုံးကျလို့ ကောင်လေးကိုလည်းသူ့မိဘတွေကနယ်ပို့လိုက်ပြီဖြစ်သလို စုမြတ်ကိုလည်း သူ့အမေကအကျယ်ချုပ်မှအကျဉ်းချုပ်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သည်။စုမြတ်လည်းအပြင်သို့ထွက်လို့ရမယ့်
လွတ်ရာလွတ်လမ်းကို အားသွန်ခွန်စိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အိမ်ဖော်မလေးအေးကသာ သူမအတွက်ထွက်ပေါက်တခုဖြစ်လာပါတော့သည်။ အရွယ်လေးကလည်း မတိန်းမယိမ်းမို့ အေးသည်စုမြတ်အတွက်တော့ အဖော်ကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပါသည်။ အေးနှင့်အတူအိမ်မှုကိစ္စများကို လိုက်လုပ်ပေးရသည်။ စုမြတ်အမေသည် သူမကိုကျူရှင်ပင်မထားတော့ဘဲ သူကိုယ်တိုင်ပင် ကြပ်မှတ်၍အိမ်မှာပင်သင်ပေးပါသည်။ စုမြတ်သည် အေးနှင့်အတူနံနက်အချိန်တိုင်းဈေးသွားပါသည်။ ချုပ်တည်းမှု့များမှလွတ်မြောက်ချင်နေပြီဖြစ်သောစုမြတ်သည် ဈေးသွားရင်းကပင် ဈေးထဲတွင်အခွေရောင်းသည့်ကောင်လေးတယောက်နှင့် ငြိသွားခဲ့ပါတော့သည်။ ကောင်လေးသည် သူမထက်ငါးနှစ်ကျော်လောက်ကြီးပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသူပီပီ စုမြတ်ကိုတခဏအတွင်းတွင်ပင် အရည်ပျော်သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သူပင်ဖြစ်သည်။ အခုလည်း စုမြတ်သည် သူမ၏ချစ်သူအကိုကြီးနှင့် သူမအခန်းထဲတွင်နှစ်ယောက်တည်းရှိနေပါတော့သည်။ ထိုသို့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်စုစုအောင်ကတော့ ကျောင်းတွင်ကလေးများကိုစာသင်ပေးနေပြီး လုံးဝကိုမရိပ်မိသေးပေ။ အိမ်သော့တာဝန်ယူထားသည့် အေးသည်လည်း သူမ၏ချစ်ချစ်နှင့် အိမ်အနောက်ဘက်ရှိသူ့အခန်းထဲတွင် နှစ်ဦးသားချစ်ရည်လူးနေပါတော့သည်။‘အားးးးးအ….ဖြည်းဖြည်း…ဖြည်းဖြည်း…ကို’စုမြတ်၏အသံသည်အခန်းတွင်းပျံနှံ့နေပြီး
အနောက်မှခွေးလိုးလိုးနေသည့်တဖတ်ဖတ်အသံကလည်း အခန်းတွင်းဝေဆာနေပါသည်။ အောက်ထပ်တွင်လည်းထိုနည်းအတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးသတ်တွင်တော့ စုမြတ်သည် ဒေါ်စုစုအောင်တားနေသည့်ကြားမှပင် အခွေဆိုင်ကအကောင်နှင့်လိုက်ပြေးသွားပါသည်။ အေးသည်လည်းသူ့ချစ်ချစ်နှင့်အတူလိုက်ပြေးသွားပြန်ပါသည်။ သူတို့နှစ်ဦးတို့သည်
တရက်တည်းတွင်ပင် ခလေးမွေးကြပါသည်။ စုမြတ်မွေးလိုက်သောသမီးလေးသည်လည်း စုမြတ်နှင့်သရုပ်တည်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အေးလည်းဘဲ သမီးမိန်းခလေးမွေးပါသည်။ အေးယောင်္ကျား၏အလုပ်တွင်ကျွမ်းကျင်မှု့ကြောင့် အတော်အသင့်ပိုက်ဆံရှိသော မိသားစုဘ၀လေးကို အေးကရရှိလိုက်ပါသည်။ အမေစကားနားမထောင် မလိမ္မာသောစုမြတ်ကတော့ လင်ဆိုးမယားတဖားဖားဘ၀ကိုရောက်နေရပါတော့သည်။ စုမြတ်ယောင်္ကျားသည် စုမြတ်နှင့်ယူပြီးအစပိုင်းတွင် ခြေငြိမ်သော်လည်း ကလေးမီးဖွားပြီးနောက်မှာတော့ မျက်နှာဖုံးခွာချလိုက်သလိုပင် သူ၏ပင်ကိုစရိုက်များပေါ်လာပါသည်။ ယောင်္ကျားကအပြင်တွင် အခွေရောင်းတာကိုအကြောင်းပြကာ မိန်းမတကာနှင့်ရှုပ်နေသော်လည်း စုမြတ်ကတော့အိမ်တွင် အိမ်မှု့ကိစ္စ၊ကလေးကိစ္စများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်နေခဲ့ရပါတော့သည်။ သို့မှပင်စုမြတ်လည်း သူမအမေ၏ပြောဆိုဆုံးမမှု့များကို သတိရကာ နောင်တကြီးစွာရနေပါတော့သည်။ သို့သော်သူမသည် ပြင်မရသောအမှားတခုကိုပြုလုပ်လိုက်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ /မရည်ရွယ်ပါသို့သော် ဇာတ်လမ်းအရသာလျော့သွားရန်လျော့ချလိုက်တာပါ၊ ကိုရီးယားကားများကိုအားကျ၍/
အမေခြေရာမနင်းပါ သို့သော်….ယောင်္ကျားဆိုးကိုရထားသော်လည်း ကွဲမရ၊ကွာမရဘ၀၀ရယ်မို့ စုမြတ်တယောက်ဒီလိုနဲ့ပင် သူမသမီးလေး စုဝတီပင်၁၀နှစ်အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ စုဝတီသည်ငယ်စဉ်ကတည်းက အဖေနှင့်အမေ၏တိုက်ပွဲများကြားတွင် နေနေခဲ့ရသည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အသက်၁၁နှစ်အရွယ်မှာတော့ လက်ပွန်းသတီးနေလာသော သူမ၏အမေသည်နှလုံးရောဂါဖြင့်ပင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတော့သည်။ စုမြတ်သေပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်စုစုအောင်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ စုဝတီကိုသူ့အဖေလက်အတွင်းမှ ခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ အဖေလုပ်သူက သမီးကိုချစ်သည်ဆိုသော်လည်း နောက်ထပ်ယူမယ့်မိန်းမကသဘောမကျတာမို့ သမီးသူ့အဖွားဆီရောက်နေခြင်းကိုပြန်မခေါ်နေတော့ဘဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါသည်။ အခုအချိန်တွင်တော့စုဝတီသည် သူမအဖွားအိမ်တွင်ပင်နေနေပါတော့သည်။အသက်၁၃နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောစုဝတီကို
အမေ့ခြေရာနင်းမည်စိုးသဖြင့် ဒေါ်စုစုအောင်သည် စုမြတ်တုန်းကထက် မြေးမလေးစုဝတီကို စည်းကမ်းတင်းကျပ်ကာထားပါသည်။ မျက်စိအောက်ကလည်း အနည်းငယ်မျှပင်အပျောက်မခံပါ။ စုဝတီသည်အဖွားကိုဘယ်လောက်တောင်အသိပေးရသလဲဆိုရင် သူမအိမ်သာသွားမည်ဆိုလျှင်ပင် အဖွားဆီမှခွင့်တောင်းပြီးမှသာ သွားရပါသည်။ ကျောင်းကိုလည်းမိန်းခလေးကျောင်းတွင်သာအဖွားကတတ်စေပါသည်။ သို့သော်အရာရာတိုင်းသည် စင်းလုံးချောဖြစ်မနေတတ်ပါ၊ အဖုအထစ်တို့သည်နေရာတိုင်းတွင် ရှိနေတတ်စမြဲဖြစ်သည်။စုဝတီသည် သူမ၏အတန်းဖော်လည်းဖြစ်၊ ညီအမလိုလည်းဖြစ်နေသည့်အေးသူဇာနှင့် မိန်းခလေးချင်းချစ်ခြင်းတွယ်မိနေကြပါတော့သည်။ ‘အေးဖြည်ဖြည်း…ဖြည်းဖြည်းးးးး’‘စုနာလို့လား…ဒါဆိုအေးဖြည်းဖြည်းချင်းဘဲလုပ်မယ်နော်…’အေးသူဇာသည်သူမ၏လက်ချောင်းဖြင့်
စုဝတီ၏အဖုတ်လေးအတွင်းသို့ ထိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်းစုဝတီ၏အခန်းထဲတွင်ပင် နှစ်ယောက်သားတယောက်ကိုတယောက်ကလိနေကြပါသည်။ အေးသူဇာသည် စုဝတီ၏နို့သီးထိပ်ခေါင်းလေးများကိုလည်း မထိခလုတ်၊ထိခလုတ်ပုံစံဖြင့် သူမလက်ချောင်းလေးများကိုအသုံးပြုကာ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ စုဝတီ၏လက်များကလည်း အေးသူဇာ၏နို့များကိုပြန်လည်ဖိညှစ်နေပါသည်။ သာယာမှု့ကတော့ ခရီးတော်တော်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ‘ဒေါက်…ဒေါက်…’‘ဟဲ့…ခလေးမတွေအခန်းထဲမှာစာမကျက်ဘဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲ…အသံငြိမ်လှချည်လားးး’နှစ်ယောက်စလုံးလက်ရှိန်သက်၍ရပ်လိုက်ကြသည်။ ဒါတောင်အေးသူဇာကသိပ်မရပ်ချင်သေး စုဝတီ၏အဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးနေသေးသည်။‘သင်္ချာတွက်နေတာအဘွားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အသံမထွက်တာ’စုဝတီသည်သူမ၏အသံစွာစွာလေးဖြင့် အခန်းအပြင်ဘက်ရှိအဘွားလုပ်သူကို လှမ်းအော်ပြောလိုက်ပါသည်။အဘွားလုပ်သူကလည်း ယုံကြည်စွာဖြင့်ပင်အခန်းရှေ့မှပြန်ထွက်သွားပါသည်။ အခန်းထဲကနှစ်ယောက်ကလည်း ဇာတ်လမ်းပြန်စကြပြန်ပါတယ်။‘အေးနော်တော်တော်ဆိုး ဒီမှာအသံမထွက်အောင်မနည်းကြိတ်ခံလိုက်ရတယ်’စုဝတီ၏အပြောများကိုအေးကစပ်ဖြန်းဖြန်းလုပ်နေပါသည်။ ‘တော်တော်ဆိုးတဲ့အေး
တွေ့မယ်’ဟုဆိုကာ စုဝတီသည်အေးသူဇာ၏အဖုတ်အတွင်းသို့ သူမ၏လက်ကိုအတင်းလိုက်ထည့်ပါတော့သည်။ အေးသူဇာကလည်း မထိတထိရှောင်နေပါသည်။ နှစ်ယောက်သားတယောက်အဖုတ်အတွင်းသို့ တယောက်နှိုက်ရန်အတွက် အပြင်းအထန်ကိုကြိုးစားနေကြပါသည်။ အဖုတ်ကိုနှိုက်မရသဖြင့် နို့များကိုဖိညှစ်ပါသည်။ နှစ်ယောက်လုံးတွင်အ၀တ်မရှိတော့သည်မို့ လက်များ၊ခြေများဖြင့်သာကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကုတင်ပေါ်တွင် အပြင်းအထန်ကိုတိုက်ပွဲဆင်နေကြပါသည်။/(နောက်ပိုင်းကျရင် G to Gတွေပါလာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ၊)/
အချစ်ဟူသည်စုဝတီနှင့်အေးသူဇာတို့သည် အခုဆိုလျှင် အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှ တက္ကသိုလ်သို့တိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်တပ်မက်စိတ်များသည် စိတ်များသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်ယောင်္ကျားဆန်လှသောအေးနှင့် စည်းကမ်းတင်းကျပ်သောအဖွားကြာင့် စုခမျာဘယ်ယောင်္ကျားလေးနှင့်မျှ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုမရှိပေ။ အေးသည် စုအပေါ်တွင်သာ ယောင်္ကျားလေးတယောက်လိုဆက်ဆံသော်လည်း အပြင်အဆင်နှင့် စိတ်အနေစိတ်ထားကတော့ မိန်းလလေးအတိုင်းသာဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်တွင်တော့ အေးတွင်ရည်းစားတစ်ယောက်လက်ဝယ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ စုကတော့ အေးနှင့်အဖွားစကားကိုနားထောင်ကာ ရည်းစားကိစ္စခေါင်းထဲမရှိဘဲ စာကိစ္စကိုသာ ခေါင်းထဲတွင်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စုသည် ကျောင်းခန်းထဲတွင်စာအတော်ဆုံး ကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ စုမသိအောင် ရည်းစားထားနေရသော အေးမှာလည်း တကယ်မသက်သာ။‘ဟင့်အင်းးးးး’‘အေးကလည်းကွာ ကို့ကိုမချစ်ဘူးလားးးး အေးကိုကိုယ်ကအတည်လက်ထပ်မှာဘဲဟာကို အပျော်ကြံတာမှမဟုတ်တာ…၊ ဘာလဲအေးက ကို့ကိုအပျော်ကြံနေတာလားးး’‘ဟင်..စကားတတ်တိုင်းနော်…အေးကကို့ကိုအပျော်ကြံစရာလားးးလို့…အေးကမိန်းခလေးဆိုတော့…’‘…လာပါအေးရယ်…နော်….’ပန်းခြံထဲမှာ ချစ်သူနှစ်ယောက် တိုးညင်းစွာစကားလုံးများဖြင့် ငြင်းခုံလျက်။အဆုံးသတ်မှာတော့
ချစ်သူအေးကို စည်းရုံးနိုင်သွားပြီမို့ နေလအောင်သည် ချစ်သူလက်ကိုဆွဲ၍ ပန်းခြံထဲမှထွက်ကာ တည်းခိုခန်းသို့ ဦးဆောင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့သည်။‘အေးးးးအ၀တ်တွေချွတ်လိုက်လေ…’‘ဟင့်အင်းးးမချွတ်ရဲဘူးးးးဒီလောက်မီးတွေလင်းနေတဲ့ဟာကို…’‘ဒါဆိုလည်း ကိုမီးပိတ်ပေးမယ်နော်…’နေလအောင်စကားကို လက်ခံသည့်အနေဖြင့် အေးရှက်ပြုံးလေးဖြင့် ခေါင်းညိမ့်အဖြေပေးလိုက်ပါသည်။‘တောက်ခ်…..’နေလအောင်ရော
အေးပါ အတွေ့အကြုံမရှိသူများဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့အတွေ့အကြုံသာ မရှိပေမယ့် ရုပ်ရုင်ကားများကိုတော့ နှစ်ယောက်စလုံးကြည့်ဖူးသူချည်းဖြစ်သည်။နေလအောင်သည်
မီးမှိတ်ပြီးနောက် အေးအနားသို့တိုးကပ်သွားပါသည်။ အေးကတော့ ထိုင်နေရာကမလှုပ်သေး၊ အေးရှက်နေမှန်းကိုသိသဖြင့် နေလအောင်သည် အေးပုခုံးကိုဖက်၍ နှုတ်ခမ်းချင်တေ့ကာ အနမ်းများပေးလိုက်ပါသည်။နေလအောင်နှင့်အေးသည်
တည်းခိုခန်းကို အခုမှသာရောက်ဖူးသော်လည်း ပန်းခြံထဲတွင်တော့ နို့ကိုင်၊ဖင်နှိုက်လောက်တော့ လုပ်ဖူးပြီးပြီဖြစ်သည်။ ပန်းခြံထဲတွင် အခါခါကိုင်တာ၊နှိုက်တာများလုပ်ဖူးသော်လည်း အ၀တ်အစားများကို ချွတ်ရမည်ကိုတော့
အေးအလွန်ရှက်နေမိပါသည်။နေလအောင်နှင့်နမ်းထားသော နှုတ်ခမ်းများကို1စင်တီမီတာလောက် အေးခွာလိုက်ပါသည်။‘ကို….အင်္ကျီမချွတ်နဲ့နော်…ဒီတိုင်းဘဲလုပ်နော်…’ချစ်သူ၏တောင်းဆိုစကားကြောင့်
နေလအောင်လည်း နမ်းရင်းအပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်နေရာမှ ရပ်တန့်လိုက်ပြီး ပန်းခြံမှာလိုပင် အင်္ကျီအပေါ်မှ ရင်သားနေရာများကို ပွတ်ပေးနေလိုက်ပါသည်။ မကြမ်းမပျော့လေးပွတ်ပေးနေသည်မို့ အပွတ်ခံရသူရော ပွတ်ပေးနေသူမှာပါ အရသာရှိနေပါသည်။ အေး၏နို့သီးခေါင်းလေးများကိုလည်း လက်ချောင်းများဖြင့် တို့ထခြင်းဖြင့် နေလအောင်သည် အေးကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ ပြီးနောက် နေလအောင်သည် အေး၏ဆံပင်များကို ဖြည်းဖြည်းဖယ်၍ လည်တိုင်လေးကို လျှာလေးဖြင့် တို့ထိပေးလိုက်ပါသည်။ ‘ယားတယ်…ယားတယ်…ကိုရဲ့…’အသံတိုးတိုးဖြင့်ပင် တွန့်တွန့်သွားပါသည်။ ထိုမှတဆင့် နေလအောင်သည် အေးအား ထိုင်နေရာမှလှဲစေလိုက်ပါသည်။ ပြီးနောက် အေး၏လည်တိုင်မှတဆင့် နှုတ်ခမ်းများသည် တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြီး အင်္ကျီအခံဖြင့်ပင် ရင်သားနေရာကို နမ်းရှိုက်ပါသည်။ နမ်းရှိုက်နေရင်းကပင် အောက်ဘက်မှလက်ဝင်၍ အေး၏ဘော်လီကို ဖြည်းဖြည်းချင်းချွတ်ချလိုက်ပါသည်။ အေးလည်းဘာတခွန်းမှမဟဘဲ ချစ်သူ၏နှုတ်ခမ်းများတွင် သာယာနေပါတော့သည်။နေလအောင်က ဘော်လီကိုဖြုတ်ပြီးချိန်တွင်တော့ အနည်းငယ်ပင့်တင်လိုက်ပြီး သူ့ခေါင်းကို အင်္ကျီအောက်ဘက်မှဝင်ကာ အေး၏ရင်သားများနှင့်နို့သီးထိပ်ခေါင်းလေးကို လျှာလေးဖြင့်တဖုံ၊ ပါးစပ်ဖြင့်တမျိုး ပြုစုပေးလိုက်ပါသည်။ လက်များကိုတော့ အေး၏ထဘီလေးကိုလျော့ချ၍ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးထဲတွင် ဟိုထိုးဒီထိုးဖြင့် နေရာပေးထားလိုက်ပါသည်။ (ကျောင်းသွားမယ်ဆိုပြီး အိမ်ကထွက်လာတာဆိုတော့ ထဘီနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်..)‘ဟင်းးးဟင်းးးးအင်းးးး’‘ကိုလုပ်တော့နော်… အေးမနေနိုင်တော့ဘူးးးးးး’အေးတယောက်မနေနိုင်တော့သဖြင့် နှုတ်ကပင် တိုးညင်းစွာ ဖွင့်ပြောလာပါသည်။ချစ်သူ၏တောင်းဆိုမှုကို
နေလေအောင်ကလည်း မဆိုင်းမတွပင်…. အင်္ကျီအောက်ထဲမှခေါင်းကိုထွက်၍ အေး၏ထဘီကို
ချွတ်လိုက်ပါသည်။ အေးကထဘီကျွတ်၏တင်ပါးလေးကို အနည်းငယ်ပင့်ပေးပါသည်။ ပြီးနောက်
နေလအောင်သည် သူ၏ဘောင်းဘီကိုလည်း ဒူးအောက်ရောက်သည်အထိချွတ်လိုက်ပြီး အေး၏အဖုတ်ဝလေးတွင် သူ၏လိင်တံကိုတေ့ကာ စတင်၍အသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်ပါတော့သည်။‘အဟင့်…အ…အင်းးးး…ဟင့်….’အေးနှုတ်ကအသံများထွက်နေသဖြင့်
နေလအောင်သည် အသံများတိတ်သွားဖို့ရာ အေး၏နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းစုပ်ထားလိုက်ပါသည်။ နမ်းစုပ်ရင်းကပင် အေးဖြင့် ကာမစပ်ယှက်နေပါတော့သည်။‘အင်းးးးးးးးးးးအီးးးးးးးးးး’သိပ်မကြာလိုက်ချိန်မှာပင် နှစ်ယောက်စလုံးပြိုင်တူဆိုသလို ပြီးသွားပါတော့သည်။‘အေး ရေ၀င်ချိုးလိုက်အုန်းမယ် လိုက်မလာနဲ့နော်…’‘အင်းပါ…’နှစ်ယောက်စလုံးရေချိုးပြီးချိန်တွင်တော့…..‘ရော့…အေးးဒါလေးသောက်ထားလိုက်’‘ဒါဘာလဲဟင်…’‘ဒီလိုလုပ်ပြီးရင် အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တဲ့ဆေးပေါ့ အေးရဲ့’‘အင်းးးပေးးး’‘ရော့ရေဗူးးး’နေလအောင်သည် အေးလက်ထဲကို ဆေးထည့်ပေးပြီးနောက် ရေဗူးကိုကမ်းပေးလိုက်ပါသည်။အေးသည် ချစ်သူရ၍ ထိုသိုအခြေအနေထိ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းကို စုကိုတခွန်းတပါရမှမပြောသလို၊ မသိအောင်ပင် စုနှင့်လွတ်ရာတွင်သာ သွားကဲပါသည်။
ဒေါသလွှမ်းခြုံဘွဲ့ရပြီးနောက်……ပညာရေးကို ဦးစားပေး၍ အမြဲတစေကြိုးစားသောစုသည် အဘွားအဖြစ်လဲ မိခင်တယောက်လို ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့သော
ဒေါ်စုစုအောင်အား ဂုဏ်တတ်စေခဲ့ပါတော့သည်။ အခုလည်း နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုကို ရရှိလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒေါ်စုစုအောင်သည်လည်း အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေမိပါသည်။ အမေလုပ်သူက ဆိုးသွမ်းခဲ့သော်လည်း သမီးဖြစ်သူက သူ့မအမေလို မဆိုးပါလားဆို၍လည်း စိတ်ပြေစရာရနေခဲ့ပါသည်။အေးကတော့ ဘဏ်တခုတွင်အလုပ်ဝင်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ နေလအောင်နှင့်ကတော့ အတွဲမပျက် တစ်ပတ်တခါ သို့မဟုတ် တစ်လတခါလောက်အနည်းဆုံး တည်းခိုခန်းသို့ရောက်ရောက်နေတတ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း လက်ထပ်ဖို့ရန်ကတော့ စုကိုသာ နှစ်ယောက်လုံးကြောက်နေကြရသည်။ လောလောဆယ်ထိတော့ စုကို သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကို အသိမပေးရသေးပေ။‘စု…မနက်ဖြန် သွားတော့မှာပေါ့နော်…’‘အင်းးးအေးးး ဟိုရောက်ရင်အေးအတွက် ပစ္စည်းတွေဝယ်ပို့ပေးမယ်လေ…’မနက်ဖြန်
ညနေတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရခါနီးစုနှင့် အေးတို့ စုအခန်းတွင်းရှိ ခုတင်ကြီးပေါ်တွင် တစ်ယောက်ကိုတယောက်ဖက်လျက် ပွတ်သီးပွတ်သပ် တီတီတာတာစကားများကို ပြောဆိုနေကြပါသည်။စကားလည်းပြောရင်း တယောက်အဖုတ်ကို
တစ်ယောက်ပွတ်သပ်ပေး၍ သာယာနေကြပါသည်။ အေးက စုအပေါ်သို့တက်ခွ၍ သူမ၏ဖင်ပိုင်းကို စုမျက်နှာပေါ်တွင် ထားပေးလိုက်ပါသည်။ စုကလည်း အလိုက်သိစွာပင် အေး၏အဖုတ်လေးကို လက်ဖြင့်ပွတ်ရုံမက နှုတ်ခမ်းဖြင့်ပင် နမ်းစုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ အေးကလည်း စု၏အဖုတ်နှင့်ဖင်ပေါက်ဝလေးကို သူမ၏နှုတ်ခမ်းများ လျှာများဖြင့် ယက်ခြင်း၊ စုပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။ တစ်ယောက်တလှည့်ဆီပင် အေးအလှည့်ပြီးတော့ စုကတဖန် အေးအပေါ်မှ ပြန်ခွတက်လိုက်ပြီး ထို့နည်းတူ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ကျေနပ်ပြီးချိန်တွင်တော့ အနားယူလိုက်ကြပါတော့သည်။နှစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါ………စုတယောက်
ကိုယ့်နားကိုကိုယ်ပင် မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားပါသည်။ တဖက်မှ အဖွားလုပ်သူပြောပြသော အကြောင်းအရာသည် စုမမျှော်မှန်းထားသော အရာမျိုးဖြစ်သည်။‘အေးလက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပါလားးးး’စုဒေါသတွေ အလိပ်လိုက်အလိပ်လိုက်ထွက်နေပါသည်။ ငယ်စဉ်ကပင် ‘နှစ်ဦးသားအိမ်ထောင်မပြုကြေး
သေထိတိုင်အတူတူနေကြမယ်’ ဟုကတိများပင်ထားခဲ့သည် မဟုတ်ပါလားးးးး။ အေး၏သစ္စာဖေါက်မှုအတွက် စုအလွန်အမင်းဒေါသဖြစ်ပြီး သူမ၏ဒေါသကြောင့် အရှေ့စားပွဲတွင်တင်ထားသော လက်တော့ကို နံရံသို့ ပစ်ပေါက်လိုက်ပါသည်။ လက်တော့လည်းခမျာမှာလည်း ကွဲအက်လျက်။‘တီ..တီ…တီ…တီ…’နေလအောင်သည် ဖုန်းမြည်သံကြားသဖြင့် ကြည့်လိုက်ရာ အေး၏ဖုန်းမှာ မြည်နေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကိုင်ရန်ပြင်လိုက်ပါသည်။ သို့သော်မကိုင်မီမှာပင် အမှတ်မထင်မြင်လိုက်ရသော ဖုန်းနံပါတ်ကြောင့် မကိုင်လိုက်တော့ဘဲ ရေချိုးခန်းအတွင်းဝင်နေသော အေးကိုသာလှမ်းအော်ခေါ်လိုက်ပါသည်။‘အေးးးရေ ဒီမှာဖုန်းလာနေတယ်’‘ကိုင်လိုက်လေ…ကိုယ်ကလည်း ဒီမှာအေးရေချိုးနေတာမပြီးသေးဘူး…’‘ကိုယ်ကိုင်လို့မဖြစ်ဘူးအေးရဲ့ စုဆီကဖုန်းးး’စုဆီကဆိုသည်နှင့် အေးလည်း ရေချိုးခန်းအတွင်းရေချိုးနေရာမှ အမြန်အမြန်လုပ်၍ ဖုန်းထွက်ယူလိုက်ပါသည်။‘ဟဲလို..စုပြော..’‘အေးးး စုပြန်လာတော့မယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းလှမ်းပြောတာ’‘ဘယ်တော့လောက်ပြန်လာမှာလဲဟင် စု..’‘မနက်ဖြန်လောက်တော့ပြန်ရောက်မယ်ထင်ပါတယ်… အေးတို့မင်္ဂလာပွဲအမီပေါ့…’အေး ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်သွားသည်။ စုကို သူမမင်္ဂလာပွဲကိစ္စကို အနည်းငယ်မျှပင် မပြောမိခဲ့ပေ။ ‘စု… နင်ဘယ်လိုသိတာလဲ…’‘အဖွားပြောပြတာလေ… နင်ကဘာလည်း ငါ့ကိုမသိစေချင်ဘူးပေါ့…’‘မဟုတ်ပါဘူးဟာ…..’ဖုန်းကျသွားသည့်တိုင် အေး ရင်တွေခုန်နေဆဲ။ သို့သော်ဒေါသသံကင်းသော စု၏စကားများကြောင့် အေး သက်သာရာအနည်းငယ်ရနေခြင်းဖြစ်သည်။မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမအတွင်းသို့
လူများအရှိုအရှိုဝင်လာကြပါသည်။ သစ်လွင်တောက်ပသော အ၀တ်အစားများကို ဆင်မြန်းထားသည့် သူများအကြားတွင် သတို့သမီး သတို့သားတို့သည်လည်း ပေါ်လွင်လှပနေကြပါတော့သည်။‘အေးးး ကွန်ဂရက်ကျူရေးရှင်းးး’နောက်ကျောဘက်မှ
ကြားလိုက်ရသောအသံကြောင့် အေးရော ၊ နေလအောင်ပါ ပြိုင်တူလှည့်ကြည့်လိုက်ကြပါသည်။ ကမ်းပေးသော လက်ကိုလှမ်းစုပ်လိုက်ရင်းး ‘ကျေးဇူးဘဲ…စု..’။ထို့နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်တော့ အားလုံးပြုံးပြုံးပျော်ပျော်နှင့်ပင် မင်္ဂလာပွဲကြီးသည် ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားခဲ့ပါသည်။
မင်္ဂလာဦးညအခါပေါင်းများစွာ တည်းခိုခန်း၊ဟိုတယ်များတွင် ပျော်ပါးဖူးကြသော်လည်း မင်္ဂလာဦးညတွင်လည်း ပျော်ပါးဖို့ရာ နေလအောင်သည် အားရှိရန် ကြက်ဥနှင့်စပါကလင်ကို သောက်သုံးနေပါသည်။ အေးကတော့ အ၀တ်အစားများကိုပင် မချွတ်ရသေးဘဲ ခုထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေပါသည်။ ခုနကမှ အားလုံးကို ယမကာများဖြင့် ဧည့်ခံပြီး၍ အခုမှပင် တနေကုန်ပင်ပန်းထားသမျှကို အနားယူရခြင်းဖြစ်သည်။ အ၀တ်အစားများသည်လည်း နံနက်က၀တ်ထားသည့်အတိုင်းပင် အခုထိမချွတ်မလဲရသေး။ ထို့ပြင် နေလအောင်သည် ဒီညကို သတို့သမီးဝတ်စုံဖြင့်ပင် နေပေးပါလို့ တောင်းဆိုးထားခြင်းကြောင့် ခင်ပွန်းအလိုကျလိုက်လျောကာ အေးလည်း အ၀တ်များကို မလဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေလအောင်က ပျော်ပါးရန် အားသန်နေသော်လည်း အေးကတော့ လက်ဖွဲ့ဗူးများကို ဖောက်ရန်သာ အားသန်နေပါတော့သည်။သောက်သင့်သည်များကို
သောက်ပြီးနောက် နေလအောင်သည် အေးရှိရာ ခုတင်ဆီသို့ ရောက်လာပါသည်။ ဘာမျှထွေထွေထူးထူး စကားဦးသမ်းမနေတော့ဘဲ၊ အေးပုခုံးကိုကိုင်၍ လှဲလိုက်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် အေး၏မျက်နှာပြင်ကို အနမ်းမိုးများ ရွာပါတော့သည်။ နှုတ်ခမ်းများကိုလည်း ကြာကြာကပ်၍စုပ်ထားသည်မို့ အေးအသက်ရှူပင်အနည်းငယ်ကြပ်သွားပါသေးသည်။ နှုတ်ခမ်းမှတဆင့် မျက်နှာတပြင်လုံး နေရာလပ်မကျန်၊ အေးမျက်နှာတပြင်လုံးတွင် နေလအောင်၏တံထွေးရည်များဖြင့် ၀င်းလဲ့နေပါတော့သည်။ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမက နေလအောင်သည် နားနှင့်လည်ပင်းနေရာများကိုလည်း အလွတ်မပေးပေ။‘အားးးးး’နေလအောင်က လည်ပင်းနေရာလေးကို ကိုက်လိုက်သဖြင့် အေးအသံပင်ထွက်၍ အော်လိုက်ပါသည်။ပြီးနောက်တွင်တော့
အေး၏ရင်သားများကို အင်္ကျီအပေါ်မှနေ၍ ပွတ်သပ်ပေးပါသည်။ ပွတ်ရင်းနဲ့ပင် အေး၏အောက်ပိုင်းထဘီများကို ချွတ်ပါတော့သည်။ နေလအောင်သည် အေး၏နို့လုံးများကို ပွတ်သပ် ကိုင်စုပ်ရင်း အောက်ပိုင်းမှလည်း အေး၏အဖုတ်လေးကို စည်းချက်ညီစွာ ထိုးသွင်းပေးနေပါတော့သည်။‘အိ..အိ..အု..အု…အ…အ…အဟင့်…’အသံများကလည်း ဖြည်းညင်းစွာထွက်နေပါသည်။နေလအောင်တော်တော်လေး
စိတ်ထန်လာပြီးဖြစ်သဖြင့် လှဲနေသောအေးကိုဆွဲမ၍ လေးဘက်ထောက်ပုံစံနေခိုင်းပါသည်။ အေးလေးဘက်ထောက်ဖြစ်သွားချိန်တွင်တော့ အေးကိုယ်တွင်လည်း မည်သည့်အ၀တ်အစားမျှ မရှိတော့ပေ။ နေလအောင်က တွန်းရင်းထိုးရင်းနဲ့ပင် အေးအ၀တ်အစားများကို ချွတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။နေလအောင်သည်
အေး၏နို့အုံတစ်ဖက်စီကို သူလက်တစ်ဖက်စီနှင့် ဆုပ်ကိုင်၍ အေး၏အဖုတ်ကိုအနောက်မှ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပါတော့သည်။ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရာတွင် အေး၏နို့အုပ်ကြီးကို ဆွဲကိုင်၍ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပါသည်။ သူကတော့ အနောက်ကဒူးထောက်လျက်။‘အ…အ…အ..’သူမ၏နို့အုံကြီးကို
ကြမ်းတမ်းစွာဆုပ်ကိုင်၍ အလုပ်ခံနေရခြင်းကြောင့် အေးတယောက် ဖီးလည်းတတ်နေသလို နာကျင်မှုကိုလည်း ခံစားနေမိပါသည်။ သို့သော်ထိုအရသာသည် သူမအတွက် အလွန်ကောင်းနေပါသည်။ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားသော်လည်း နှစ်ယောက်စလုံးတွင် ချွေးများစို့လျက်။ အဆုံးသတ်တွင် နေလအောင်သည် အေး၏အဖုတ်ထဲတွင်ပင် ပြီးပေးလိုက်ပါသည်။ အေးကတော့ ကုန်းကုန်းကွကွကြီးဖြင့် မှောက်ကျသွားပါသည်။နှစ်ယောက်စလုံး
ခုတင်ပေါ်တွင် လဲနေလိုက်ကြပါသည်။ သို့သော်ကြာကြာလဲမနေရလိုက်ပါ နေလအောင်သည် အားဆေးနှင့်ဓာတ်စာများအရှိန်ကြောင့် အားပြန်ပြည့်လာသဖြင့် အေးအား တဖန်လုပ်ရန် ထထိုင်လိုက်ပါသည်။ပြီးနောက် အေးအဖုတ်လေးအား မထိတထိလာစနေပါတော့သည်။ အေးလည်း အလိုက်သသိပင် နေပေးလိုက်ပါသည်။ ခဏအကြာတွင်တော့ စောနကအတိုင်းပင် ထပ်မံလုပ်ပြန်ပါသည်။ ဒီတခါအပြီးတွင်တော့ အေးတယောက် မျက်ဖြူစိုက်သွားပါတော့သည်။ နေလအောင် ဘယ်လောက်ဘဲ လာဆွနေစေကာမူ အေးတယောက်မလှုပ်နိုင်တော့ပေ။ ဒီညအတွက်တော့ လက်ဖွဲ့ဗူးတော့မဖေါက်ဖြစ်လိုက် သို့သော် အေး၏အဖုတ်လေးကိုတော့ နာနာကျင်ကျင်ကို အဖောက်ခံလိုက်ရပါတော့သည်။ အေးနို့အုံနှစ်ဖက်လုံးတွင်လည်း နီရဲတွက်လျက်။ အေးအနားယူသွားပြီမို့ နေလအောင်လည်း ဆက်မနှောင့်ယှက်တော့ဘဲ အိပ်စက်အနားယူခြင်းဖြင့် မင်္ဂလာဦးညကို ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတော့သည်။
ငြိုးသူဒေါသနေ့လည်11နာရီလောက်မှပင် နှစ်ယောက်စလုံး အိပ်ယာမှနိုးလာကြပါသည်။ မနေ့ကပင်ပန်းထားသည်နှင့် ညကပင်ပန်းထားသည်များကို ပြေလျော့စေရန် ရေချိုးကိုယ်လက်သုတ်သင်ရန် အေးထလိုက်ပါသည်။ နေလအောင်ကိုလည်း တခါတည်းပင် နိုးလိုက်ပါသည်။‘ကို…ထ..ထထ…’နေလအောင်လည်း အေးကနိုးသဖြင့် ကမူးရှူးတိုးနဲ့ထလိုက်ပါသည်။ နေလအောင်ထချင်လွန်း၍ ထခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အေးကရေအတူတူချိုးရအောင်ဆိုသဖြင့်သာ တဏှာဦးစီးကာဖြင့် ထလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရေချိုးခန်းအတွင်းသို့ နှစ်ယောက်စလုံးရောက်သည်ဆိုရင်ဘဲ နေလအောင်သည် အေး၏ကိုယ်အနှံ့ကို သူ၏လက်များဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးပါတော့သည်။ အပေါ်မှာတော့ ရေပန်းကိုဖွင့်ထားလျက်။ ချေးတွန်းပေးနေသယောင်ရှိသော်လည်း ချေးတွန်းပေးနေခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။နေလအောင်၏လက်များသည် အေး၏အဖုတ်အတွင်းတွင် အ၀င်အထွက်သိပ်ညက်လွန်းနေလှပါသည်။‘ဟင်… ကို… လုပ်မယ်ဆိုလည်းလုပ်တော့ကွာ… လက်နဲ့တော့မလုပ်နဲ့….နာတယ်…’နေလအောင်လည်း
အေးကိုအလျော့ပေးကာ သူ၏လိင်တံကို လက်ဖြင့်အနည်းငယ်ပွတ်၍ အေးအဖုတ်အတွင်းသို့
စတင်ထိုးသွင်းပါတော့သည်။ ရေများကြားတွင် နှစ်ဦးသား ကာမစပ်ယှက်နေပုံက အားရစရာအတိပင်။ အေးလည်း နံရံကိုလက်ထောက်လျက် မတ်တပ်ကိုမလဲအောင်ထိန်းပြီး နေလအောင်၏ပြုစုမှုကိုခံစားနေပါတော့သည်။ညမိုးချုပ်သော်……မနေ့ကမဖောက်ဖြစ်လိုက်သော
လက်ဖွဲ့ဗူးများသည် အခန်းတွင်းတွင် ဒီအတိုင်းရှိနေပါသေးသည်။ ဒီညတော့ လက်ဖွဲ့ဗူးများကိုဖောက်ရန် အေး လက်ဖွဲ့တခုချင်းစီကိုကြည့်၍ ဘယ်ဟာကစဖောက်ရင်
ကောင်းမည်နည်းဟု တွေးနေမိပါသည်။ နေလအောင်ကတော့ ခုနကလာသော သူ့သူငယ်ချင်းများကို ခြံဝသို့လိုက်ပို့ရင်း လေအနည်းငယ်ပစ်နေပါသည်။‘ပုတ်….’အေးလက်ဖြင့်
မတော်တဆတိုက်လိုက်မိသဖြင့် လက်ဖွဲ့ဗူးလေးတစ်ခုသည် ခုတင်ပေါ်တွင်တင်ထားရာမှ အောက်သို့ကျသွားပါသည်။ အေးလည်း လက်ဖွဲ့ဗူးလေးကိုပြန်ကောက်လိုက်ရင်း ဒီဗူးလေးကိုအရင်ဖောက်မည်ဟု တွေး၍ ချက်ချင်းဆွဲဖောက်လိုက်ပါသည်။‘အားးးးးးးးး’အေး၏အသံနက်ကြီးသည်
တစ်အိမ်လုံးပျံ့နှံ့သွားပါတော့သည်။ သူငယ်ချင်းများကိုပို့ပြီး၍ ပြန်လာသော နေလအောင်ပင် အပေါ်ထပ်လှေကားကိုတက်နေရင်း ကြားလိုက်ရသော အေး၏အသံကြောင့် အလျင်အမြန်ပြေးကာ အိပ်ခန်းသို့ ပြေးတက်သွားလိုက်ပါသည်။ အခန်းအတွင်းသို့ နေလအောင်ရောက်ချိန်တွင်တော့ အေးပါးစပ်ထဲမှအဖြူရည်များထွက်လျက်၊ နေလအောင် အေးကိုပွေ့ဖက်လိုက်ပါသည်။ သို့သော် အဆိပ်ပြင်းလှသော မြွေ၏ကိုက်အားကြောင့် အေးအသက်မရှိတော့ပေ။နေလအောင်လည်း ရူးမတတ်ဖြစ်ကာ ငိုယိုဒေါသထွက်နေပါတော့သည်။ ဒေါသဖြင့်ပင် ကိုက်သွားသော မြွေကိုလည်း သည်းကြီးမဲကြီးရှာပါသည်။ သို့သော်မြွေကားရှာမတွေ့ချေ။အေးသေသည့်အကြောင်းကို
မိဘများနှင့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကို နေလအောင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်။ ရဲများကလည်း သေမှု့မှု့ခင်းဖြစ်တာကြောင့် သေရုပ်အလောင်းကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကာ
ဖွင့်ထားသောလက်ဖွဲ့ဗူးကိုလည်း သက်သေခံအဖြစ် စစ်ဆေးရန် သိမ်းဆည်းသွားပါသည်။
ညားတာမှ၂ရက်ပင်ရှိသေးသော သတိုသမီးအေးသေသွားသဖြင့် နေလအောင်ကတော့ ရင်ထုမနာ။
မိဘများနှင့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကလည်း ထိုနည်းတူစွာပင်။စုဘယ်လိုမှ အိပ်လို့လည်းမပျော်နိုင်၊ စားလို့လည်းမ၀င်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ အေးကို သူမလက်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်သတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း လက်ဖွဲ့ဗူးထဲတွင် မြွေထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် သူမသတ်လိုက်သည်ပင်မဟုတ်ပါလော။ နိုင်ငံခြားမှပြန်မလာခင်ကပင် ကြိုတင်စီမံလာခြင်းဖြစ်သဖြင့် အေး၏ရက်လည်မတိုင်ခင်မှာပင် စုသည် နိုင်ငံခြားသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ဒေါသကြောင့် ပြုလုပ်လိုက်သော အမှားတစ်ခု၏အရိပ်သည် သူမနှင့်ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါသွားပါသည်။အေးနှင့်စုသည်
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်နေသဖြင့် နေလအောင်သည် စုကို လုံးဝသံသဃမ၀င်ခဲ့၊
မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကလည်း စုသည် သူတို့နှစ်ဦးကို ပြုံးရွှင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုထောပနာပြုခဲ့သည်မဟုတ်ပါလော။ အေးစိတ်နှင့်ပင် နေလအောင်လည်း ဘုရားရိပ်၊တရားရိပ်ကို ခိုလှုံသွားပါတော့သည်။စုသည်လည်း နိုင်ငံခြားသို့ပြန်သွားပြီး မကြာခင်မှာပင် ဟိုနိုင်ငံသားဘဲ ခံယူလိုက်သလိုလို၊ ဘာလိုလိုကြားပြီး သူမ၏အမေတစ်ဖြစ်လဲအဖွားဒေါ်စုစုအောင် သေသောအချိန်တွင်ပင် စုရောက်လာခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အားလုံးကတော့ စုတယောက် သူမသူငယ်ချင်းအေးအတွက် ပူဆွေးသောကကြီးစွာရောက်နေသည်ဟုပင် ထင်နေမိကြပါတော့သည်။ ရဲများကလည်း အမှုကို မတော်တဆမှု့အဖြစ်ပင် သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။ဒေါ်စုစုအောင်သည်
မသေခင်က အေးသေဆုံးမှု့သည် သူမ၏မြေးစုနှင့်ပတ်သက်နေကြောင်း သိသော်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အရိပ်အမွတ်ပင် မပြောပြခဲ့ပေ။ပြီးပါပြီ။ Posted by